अंग्रेजी नयाँ बर्ष मनाउने हुने टोपी दिवस मनाउन नहुने ? - Muldhar Post
अंग्रेजी नयाँ बर्ष मनाउने हुने टोपी दिवस मनाउन नहुने ?
संझना पौडेल २०७६, १४ पुष सोमबार
टोपी टाउको ढाक्ने गरी लगाउने कपडा वा टाउको पहिरन हो । यो शिर छोप्न, त्यसको शोभा बढाउन वा रक्षा गर्नाका निम्ति चाउलो टोपीको घेरामाथिको भाग वा चक्का र घेरा हाली सिइएको बस्त्र हो । टोपी पुरुषहरूले लगाउँ छन् । नेपालीले प्राचिनकालदेखि टोपी लगाउने गरेको पाइन्छ । नेपाली टोपी नेपालीहरूको राष्ट्रिय पोशाक हो । टोपी मुख्य रुपले नेपालको पहाडी भू–भागमा बसोबास गर्ने प्रायः सबै थरिका मानिसहरूले परम्परागत रुपमा लगाउने गर्छन् ।टोपीका कपडा घरेलु तानबाट बुनिन्छ । भक्तपुरमा कालो टोपी बनाइन्छ, जसलाई भादगाउँले टोपी भनिन्छ । पाल्पा, पोखरा र तेह्रथुममा ढाका टोपी बुनिन्छ । साधारण कपडाबाट पनि टोपी सिउने गरिन्छ । टोपीलाई शिरपोस पनि भनिन्छ । यस्तै ढाका टोपी ढाकाको कपडाबाट बनेको पुरूषहरूले लगाउने पहिरन टोपी हो । यो मुख्य रूपले नेपालको पहाडी भू भागमा बसोबास गर्ने प्रायः सबै थरीका मानिसहरूले परम्परागत रूपमा लगाउने गर्दछन् ।ढाका टोपी नेपालको राष्ट्रिय पोशाक पनि हो । ढाका टोपी घरेलु तानमा हातले बुनेको कपडाबाट बनाइएको हुन्छ । ढाका टोपी पुरूषहरूले मात्र प्रयोग गर्छन् । प्रायः दौरा सुरूवालको साथमा ढाका टोपी लगाउने गरिन्छ । ढाका टोपीले नेपाली जातिको पहिचान जनाउँछ । पाल्पाली ढाका टोपीलाई देशकै उत्कृष्ट ढाका टोपी मानिन्छ ।
मेरो टोपी आफ्नो सन्तान चिन्हाउने जन्मैको पाती जस्तो हो माथिका यी गीतका हरफहरु चर्चित गायका गोपाल योन्जनले गाउँनु भएको हो । म नेपाली, तपाई नेपाली, उ नेपाली र हामी सबै नेपाली नेपालीको पहिचान नेपालीको गौरव अनि हामी सबैको शीरमा लगाउने टोपी नेपाली टोपी । जब जब टोपीको कुरा उठ्दछ सम्झन्छु इतिहासलाई अनि वीर नेपालीलाई । वास्तममा राष्ट्रियता झल्काउने नेपाली ढाका टोपीको महत्व देश तथा विदेशमा धेरै छ ।नेपाली र नेपालीमूलका नागरिक भएका सबै देश र स्थानहरुमा नेपालीपनको निरन्तर खोजी तथा त्यसको संरक्षण र प्रबर्द्धन भैरहेको अहिलेको अबस्थामा समग्र नेपालीहरुको साझा र मौलिक पहिचानको चिन्ह नेपाली टोपी रहेको छ । हाम्रो मान, शान र पहिचान नेपाली टोपी हो । यसको सम्मान अब हामी सबैले गर्न जरुरी छ । विदेशमा गएर टाइसुटमा सजिएका युवाहरु र स्वदेशमा रहेर पश्चिमा संस्कृतिमा रमाउँदै तिरमिरे टोपीमा रमाउनेहरुले अब नेपालीको पहिचानलाई जोगाउनु पर्ने बेला आएको छ ।जनवरी १ का दिनमा नेपाली टोपी दिवस मनाइने भएको छ । सदा झै यो वर्ष पनि जनवरी १ लाई नेपाली पोशाक लगाउने दिनका रुपमा मनाइने कुरालाई आजभोलि समाजिक सञ्जालहरुमा निकै महत्वको साथमा हेरिएको छ ।
राष्ट्रिय पोशाकको प्रयोग गरी राष्ट्रियपन झल्काउन र यसको जगेर्ना गर्नका लागि भन्दै १ जनवरीलाई नेपाली पोशाक लगाउने दिनका रुपमा मनाउन थालिएको अभियान कर्ताहरुले बताएका छन् । सो दिन नेपाली राष्ट्रियता झल्काउने पोशाक लगाएर अभियानमा समर्थन जनाउन र राष्ट्रियताका लागि केही ऊर्जा प्रदान गर्न सबैमा अभियानकर्ताहरुले आग्रह पनि गरेका छन् । वर्षको एकदिन राष्ट्रिय पोशाक लगाएर सामाजिक संजालमा फोटो अपलोड गर्दैमा राष्ट्रियता नजोगिए पनि राष्ट्रियता संकटमा पर्न थालेको वर्तमान अवस्थामा यसले केही मात्रामा भए पनि टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।यो अभियानमा देश–विदेश र गाउँ सहर जो जहाँ भए पनि सक्दो सहयोग गर्दै अभियान चलाउन आग्रह समेत गरिएको छ । सम्भव भएसम्म सधै नेपाली पोशाकमा सजिऔ, सम्भव नभए हरेक वर्ष जनवरी १ का दिन नेपाली पोशाक लगाऔ र सोसियल मिडियामार्फत नेपाली पोशाकको प्रचार–प्रसार गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।नयाँ बर्षको उत्सव हुने र त्यस अवसरमा नेपालीपनको प्रयोग गर्न र नेपालका नेपालीहरुमा समेत उक्त दिनमा पर्वजस्तो उल्लासमय बाताबरण हुने हुनाले उक्त दिनमा नेपाली टोपी लगाएर नेपाली टोपी दिवस २०१४ जनवरी १ बाट संसारभर मनाउन शुरु गरिएको हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालीपनको प्रबर्द्धन हुने र देशभित्र पनि टोपी संस्कारलाई थप प्रबर्द्धन र प्रसार दिन मद्दत गर्दछ । बिगतका बर्षहरुमा पनि संसारभरबाट भएको सहभागिता र संचार माध्यमहरुबाट पाएको सद्भभावना यसपटक पनि प्राप्त हुने हुने कुरामा कुनै दुइमत छैन ।
गत बर्ष जस्तै यसपाली पनि १ जनवरी २०१९ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस भव्यताका साथ मनाउन आ आफ्नो आफ्नो स्थान र अवस्था अनुसार नेपाली टोपी लगाऔं, फोटो खिचौं अनि नेपाली टोपी दिवसको फेसबुकमा अपलोड गरौँ भन्ने नारा अभियानकर्ताहरुले बोकेका छन् । हाम्रो मान, शान र पहिचान नेपाली टोपिलाइ सम्मान गर्ने अभिप्रायले जनवरीको पहिलो दिनलाई टोपी दिवसको रुपमा मनाउ भन्नेजस्ता नाराहरुले निकै चर्चा कमाएको थिए ।जनवरी १ मा अंग्रेजी पात्रोको चलन भएका देश र स्थानहरुमा नयाँ बर्षको उत्सव हुने र त्यस अवसरमा नेपालीपनको प्रयोग गर्न र नेपालका नेपालीहरुमा समेत उक्त दिनमा पर्वजस्तो उल्लासमय बाताबरण हुने हुनाले उक्त दिनमा नेपाली टोपी लगाएर जनवरी १ लाई अझै बिशेष बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा रहेको पाइन्छ ।जनवरी १ तारिखको दिन नेपाल तथा विश्वभरी छरिएरहेका सम्पूर्ण नेपालीले आ आफ्नो स्थान र अवस्था अनुसार नेपाली टोपी लगएर मनाउने भएको छ । गोर्खालीको पहिचान हो नेपाली टोपी सामाजिक सन्जालको आजको युगमा नेपाली टोपी लगाएको फोटोलाई सामाजिक सन्जालमा राख्न अनुरोध गरिएको छ ।अंग्रेजी नयाँ बर्षको पहिले मितिलाई साभार गरेर नेपाली टोपी दिवसको सुरुवात गरिएको थियो जुन अत्यन्त सफल पनि भएको थियो । यस्तै गत बर्ष हाम्रो टोपी हाम्रो सान, नेपालीको पहिचान, भन्ने मुल नाराका साथ यो दिवस मनाईएको थियो । टोपी दिवसको अवसर पारेर सयौं पुरुषले शिरमा नेपाली ढाका टोपी पहिरिएका थिए । यस्तै उनीहरुले बिभिन्न ठाँउ ठाउँमा र्याली निकालेका थिए । प्रत्यक्षदर्शिले कुनै आन्दोलनको नारावाजी भएको महसुस गरेका थिए । तर, लाईनमा सबैका शिरमा नेपाली टोपी देख्दा कुनै चेतनामुलक र्याली भएको अड्कल काटेर र्यालीमा सहभागी भए।
जानकारका अनुसार यो दिवस मुलुककै पहिलो दिवसका रुपमा मनाईएको छ । र्यालीमा सबै उमेरका पुरुषको सहभागीता रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालीपन प्रवर्द्धन गर्न र देशभित्र पनि टोपी संस्कार विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली टोपी दिवस मनाउन लागिएको हो। नेपाली र नेपालीमूलका नागरिक भएका सबै देश र स्थानमा नेपालीपनको निरन्तर खोजी तथा त्यसको संरक्षण र प्रवद्धधन भइरहेको अहिलेको अवस्थामा समग्र नेपालीको साझा र मौलिक पहिचानको चिह्न नेपाली टोपी रहेको छ ।शताब्दी औंदेखि प्रयोग भइरहेको नेपाली टोपी प्रयोगलाई अझै व्यापक र विश्वमय बनाउने उद्देश्यले अभियान थालनी गरिएको हो । विश्वमा नेपालीहरुको पहिचान झल्काउने नेपाली ‘ढाका’ टोपीको महत्व धेरै छ । ःपृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै नेपाली टोपीको पहिचान झल्कदै आएको र ब्रिटिस साम्राज्यवादहरुले समेत नेपाली टोपीको गाथालाइ ईतिहाँसमा उल्लेख गरेको घटनाले समेत यो टोपीको आफनौ मौलिक महत्व रहेको छ । नेपालमा वर्षेनी टोपी दिवस मनाइँदै आइएको छ ।
राजधानी लगायत देशैभरी नेपाली टोपीको प्रदर्शन गरी टोपी दिवस मनाउने परम्परा नै बसेको छ । विगतका बर्षहरुमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शालिकमा नेपाली भादगाँउले टोपी पहिराउदै नेपाली टोपी दिवस विभिन्न ठाँउमा समेत मनाइएको थियो । नेपाली टोपी हाम्रो शिरमा रहँदामात्र हामी नेपाली भएको पहिचान हुने धेरैको भनाई छ । सबै नेपालीले नेपाली टोपीको महत्व बुझ्नु जरुरी छ । टोपी लगाएर पहिचान जोगाईराख्नुपर्ने सुझाव धेरैको धारणा छ ।(पौडेल प्रेस काउन्सिल नेपालमा सम्वद्ध हुनुहुन्छ)
नासुको आसु झार्ने विधेयक
सरकारको संवेदनहीनता कहिलेसम्म
राजनीति र कर्मचारीतन्त्रसँग जोडीएको
जात तल्लो हैन तल्लो
यि हुन सक्छन् आगामी
नेपालमा यसकारण लकडाउन आवश्यक